Xeryaha Baydhabo Oo Ay Ku Biireen Kumanaan Qoys Oo.. – idalenews.com
Baydhabo(INO)- Kumannaan qoys oo ay saameysay Abaar ka jirta Qiibo ka mid ah Gobolada KGS ayaa labadii bilood ee u dambeysay ku soo barakacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Qoysaskan oo u badan beeraley waxaa ka dhammaaday keydkii uga haray dalagyadii ay horay u goosteen, iyadoo roob-yari gobolladan ka taagneyd labadii sano ee la soo dhaafay ay hoos u dhigtay wax-soo-saarkii beeraha.
Guddoomiyaha arrimaha samafalka ee maamulka gobolka Bay, Cumar Maxamed Cali ayaa Warbaahinta u sheegay inay diiwaangeliyeen in ka badan 4,000 oo qoys oo ay abaarta ka soo barakicisay Diinsoor, Qansaxdheere, Ufurow iyo tuulooyinka hoostaga ee gobolka Bay iyo deegaanno kale oo dhinaca Bakool ah. Wuxuu xusay in dadkan markii ay magaalada yimaadeen ay intooda badan ku biireen xeryo ay horay u deggenaayeen dad soo barakacay, qaarka kalena ay dulsaar ku noqdeen eheladooda.
Nuuney Macallin Isxaaq oo wadata afar carruur ah waxay ka mid tahay 50 qoys oo ku biiray xerada lagu barakacay ee 11-ka Jannaayo. Waxay abaartu ka soo barakicisay degmada Diinsoor oo 120 km u jirta Baydhabo, iyadoo xerada timid 10-kii bishan Sebtembar. Nuuney ayaa Warbaahinta u sheegtay inay soo lugeeyeen 90 km, waxayna soo socdeen muddo shan maalin ah. Markii ay yimadeen deegaanka Goofgaduud oo 30 km u jirta Baydhabo ayay bajaaj ku soo raaceen lacag $30 ah oo ay telefoonka ugu direen dad ehelkeeda ah oo jooga Baydhabo.
Xaawo Cabdi Cali oo ka mid ah beeraleyda soo barakacday ayaa Warbaahinta u sheegtay in ay maalintii toddobaad ku hoyaneyso xero lagu barakacay, isla markaana aysan haysan wax ay cunaan, iyada iyo labadeeda carruurta ah ayay xustay inay habeenkii seexdaan meel bannaan oo dhaxan iyo qabow leh. “Carruurta way ku qandhadeen meeshan bannaan ee aan seexiyo,” ayay tiri. Sababta ugu weyn ee ay magaalada u yimaadeen ayay ku tilmaantay inay tahay meel ay ka heli karaan fursado shaqo ama ciddii caawineysa ay ugu imaan karto.
Ugu dambeyntii, Guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Aadan Cali Aadan ayaa Warbaahinta u sheegay in ay qorsheynayaan inay hay’adaha samafalka u bandhigaan xaaladda dadkan, maaddaama ay baahida dadkan ka badan tahay mid uu maamulkoodu wax ka qaban karo.